Erayo Ifaya Oo Ku Saaban Maalmihii Dahabiga ahaa Ee Soomaaliya | Xaqiiqonews
Erayo Ifaya Oo Ku Saaban Maalmihii Dahabiga ahaa Ee Soomaaliya
Soomaaliya waxa ay soo jirtay 6,000(lix kun) oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise CSW, 1979-kii Dowladii Xilligaasi jirtay ee Soomaaliya(dowladii kacaanka) waxa ay tijaabisay gantaalka riddada gaaban oo soomaaliya lagu sameeyey, waxaana qorshaha Soomaalida ka mid ahaa isku filnaasho in la gaaro sanadka 2000(bilowga qarniga 21,aad).
dad badan oo soomaalidbuba ka mid ah ayaa u heystay in soomaaliya ay tahay mid “dhalasho cusub” ilaa laga soo gaaro waqtigan oo la ogaaday in soomaalida ay ka da,weyn tahay carabta iyo umadaha afrikaanta ah intooda badan.
Godod ku yaallo Laas-geel, gaar ahaan meelo ku dhaw Hargeysa ayaa waxaa laga argay dhagxaan ay ku qoranyihiin qoraalo la qoray 8,000 (sideed kun)oo sano ka hor, arintase xiisaha badan oo soo jiidatay baarayaasha ayaa waxa ay aheyd luuqadda qoraalka oo ilaa hadda la garan la,yahay ! waana ha xiraalle wili horyaal cilmi-baarayaasha.
Maxaad u maleyneysaa in Soomaalida Caabudi jireen Islaamka ka hor ? !
Qarnigii 13,aad oo hadda laga joogo 800(sideed boqol) oo sano ka hor ayey diinta islaamka na soo gaartay, laakin ka hor qalbiyadeena waxa ay daacad u ahaan jireen Ilaahii Soomaalida ee la oran jiray “Waaq” waxaan xusid mudan in caqiidani aan isla wadaagi jirnay guud ahaan dadyowga Kushitsika oo Oromadana ay ka mid tahay.
Tani macnaheedu waa In Soomaalida ay jireen muddo badan, islaamka ka dib soomaalida waxa ay noqotay bir adag iyo waran xoog leh, sii gooban soomaalida waxa ay difaac u ahaayeen dhamaan dowladihii islaamka ilaa dowladii khilaafada Cushmaaniyiinta
Waa kan hogaamiyihii Soomaaliga ahaa, al imaam Axmed Ibrahim Al-ghazii waxaa uu ka difaacay Burtaqaaliyiinta in dhibaateeyaan qabrigii Nabiga SCW.
Soomaalid ayaa sii ahaatay “Dhufeys adag” ilaa laga soo gaaray waqtigii gumeystaha, waqtigii gumeystaha waa xiligii ugu badneyd ee la caburiyey xadaaraddii Soomaalida, waxaan badalkeeda gumeystaha uu soomaalida baray “ku diirsanaan(in ay dadkale ku diirsanaadaan)”,waqtigan waa waqtigii uu kala go,a ku yimid xadaaraddii Soomaalida.
Ilaah ayaa markale doonay in maalmaha sidooda loo soo celiyo,, waxa ayna Soomaalida dhisteen dowlad sal adag, markale waxaa dib loo qoray afka Soomaaliga Cusub oo ah kan aan hadda ku hadalno.
Intii Lagu guda jiray aayamihii(kacaanka) Soomaaliya waxa ay gaartay horumarkeedii ugu sareeyey ee xagga tiknoolajiyadda iyo Millatariga, waxaana qofka soomaaliga ah uu noqday “boqorka dhulka”
Cabdiraxaman Baadiyow waxaa uu sheegay in ay jirtay arin sir ah oo dad badan laga qarin jiray oo ah in dowladii Soomaaliya ay tijaabisay gantaal ridda gaaban oo lagu Sameeyey gudaha Soomaaliya 1979-kii- waa 2 sano ka dib dagaalkii Soomaali galbeed.
Dhanka kale waqti dunida carabta iyo afrikaanta intooda badan ay ka cabsi jireen xitaa in ay isku aaminaan baabuurta, ayaa soomaaliya waxa ay gabdhaheeda ku tababareysay duulinta diyaaradaha dagaalka !
Waa tan Asli Xasna Cabaade oo diyaaradeeda kaga qeyb qaadatay dagaalkii 1977-kii, iyadoo xusid ay mudan tahay in sacuudiga sanadkan dhaxdiis oo kaliya loo ogalaaday dumarka baabuur wadista, halkan Imaaraatkana gabadhii ugu horeysay ee duuliye noqotaa ay aheyd 2014-ka.
Mid ka mid ah habeenadii Pakistan ay tijaabineysay hubkeeda nukliyeerka, Dowladaha galbeedka iyo Israel waxa ay isku dayeen in ay joojiyaan tijaabada, haase ahaate Soomaliya waxa ay ku jirtay diyaar garowgii ugu dambeeyey, si looga hortago duulaanka galbeedka, waxaana heegan la giliyey ciidankii badda iyo kuwii cirka ee Soomaliya, arinkaasi oo ugu dambeyn dowladihii galbeedka ku qasbay in ay heshiis qaatan.
Soomaaliya waxa ay hiigsaneysay in sanadka 2000 ay gaarta isku filnaan dhan walbo ah, xagga dhaqaalaha, warshadaha, tiknoolajiyadda, waxbarashada iwm, Soomaaliya waxa ay ka horeysay tiknoolajiyad ahaan, millatari ahaan iyo waliba dhaqaala ahaanba Turkiga, Maleesiya iyo Koonfur Afrika.
Ka hor inta aysan Soomaaliya ku hor kufin gododka khiyaanada Mareykanka, waxa ay dunida bartay casharo taariikhda galay sida dagaalkii 1977-kii.
Ugu dambeyntii Waa in dunida ogaataa “hooyooyinkaa shalay dhali jiray Somalida horumarsaneed, in ay wili uur qaadaan oo ay dhalaan Dadkii hore oo kale”, mana harsana waxa aan ka aheyn ilbiriqsiyo, dunidana waxa ay ku waabriisan doontaa Soonmaaliya Cusub.